Shiinaha Nordic Casri Ah Qolka Nolol Wanaagsan ee Casriga ah Laba-Midab TV-ga Joogtada Golaha Wasiiradda # 0020 Soo-saar iyo Warshad | Yamazonhome
Nordic Casri Ah Qolka Nolosha Qoryaha Adag Oo Laba-Midab Taagan TV-ga # 0020
Magaca: Istaaga TV
Lambarka nambarka: Amac-0020
Cabir: 1800 * 350 * 430mm
Alwaax adag oo laba-midab afar-khaanadood ah oo TV-ga ka soo gala
Magaca: Miiska dhinaceeda
Asal ahaan: Weifang, China
Kabadh TV fudud oo casri ah
Jaleecada hore, kabadhan TV-ga ah ee lacquered cad waa mid fudud oo xarrago leh. Dusha lacquered nadiif ah waxaa la jaan qaadaya afar alwaax adag oo indhaha ku wareegsan, kuwaas oo si fudud loo soo jiido oo aan u keeni doonin kuuskuus shil ah. Labo sawir gacmeedyo dabiici ah iyo naqshadeynta miiska dushiisa, dheriga dhirta dheriga cagaaran, waxay ku kordhinayaan firfircoonaan iyo firfircooni badan golaha wasiirada TV-ga.
Lugaha kabadhka adag ee geesaha leh oo adag oo wareegsan
Marka loo eego naqshadda sayniska ee golaha TV-ga, lugaha golaha wasiirada ee dhumucda leh, xagal qallooc macquul ah, iyo lugaha golaha wasakhda oo wareegsan xagga hoose waxay ka dhigayaan awoodda qaadista mid adag, mid aad u adag oo xasilloon, hoos u dhig dusha sare ee xiriirka dhulka, yaree iska caabinta khilaafaadka, iyo samaynta way kuu fududaanaysaa inaad guurto, riixdo oo jiido Sug. Iska yaree iska caabinta, iska ilaali sawaxanka culus, oo dheeree cimriga adeegyadeeda.
Naqshadeynta khaanadda badhanka
Naqshadeynta badhanka casriga ah ee fudud ayaa ka samaysan qoryo adag, oo xoog leh oo adkeysi leh. Meel soo gal oo si tartiib ah khaanadda u soo saar, adoo waqtiga iyo dadaalka badbaadinaya. Qabashada badhanka mugdiga ah waxaa lagu dhejiyaa lacquer cad oo fudud oo nadiif ah, oo muujinaya nooc qurux badan. Ku qanco raacdadaada sare ee moodada dharka.
Naqshadeynta jirka ee adag
Qaab dhismeedka jirka ee dhabarka adag wuxuu si wax ku ool ah u yareyn karaa halista waxyaabaha ku jira khaanadda oo uusan ku dhex siibanaynin, taasoo sababi karta halista inuu dhaco. Dhabarka xiran waa mid fudud oo dabiici ah, fidsan oo siman, aadna loogu dhejin karo darbiga si looga ilaaliyo waxyaabaha dhacaya.
Naqshad heer sare ah oo keyd ah
Afarta khaanadood ee waaweyn oo leh awood sare, si habsami leh u qaybsan, ayaa kaa caawin kara inaad si macquul ah u keydiso walxaha qaybaha kala duwan. Naqshadeynta biraha isteerinka ee alwaaxda adag waxay kordhisaa jilicsanaanta udhaxeysa khaanadaha, mana soo saarto buuq sida silsilado bir ah waana fududahay in miridhku dhaco. Tareenka isteerinka ah ee qoryaha adag wuxuu yareeyaa burburka isku dhaca alwaaxa wuxuuna kordhin karaa nolosha adeegga golaha wasiirada TV-ga.
Tayo sare leh golaha wasiirada TV geedkii
Waxaa laga sameeyaa geedkii caddaa ee laga keenay Waqooyiga Ameerika, alwaax adag oo saafi ah lama dahaarayo, mana aha alwaax raag ah oo raqiis ah. Tayada alwaaxda waxay dhaaftay kormeerro tayo leh oo adag, markaa waad nasan kartaa. Hadhuudhka alwaaxda waa mid cad oo dabiici ah, hadhuudhka alwaaxda wanaagsan waxaa loo habeeyay nidaam gaar ah, qurux iyo fudeyd leh, qaabku waa mid adag oo waara, gacantiina waxay dareemeysaa ganaax iyo hufnaan. Waa alwaax aad u fiican oo lagu sameeyo alaab guri oo tayo sare leh.
Hore: 2020 qalabka isboortiga biyaha xilliga firaaqada ee SUP cusub 0364
Xiga: Nordic minimalist white alwaax adag alwaax adag aqal yar TV Joogtada golaha wasiirada # 0021
Cammack Kiciyey rinji Deluxe Wood Bakayle Hutch ...
Qalabka Sariirta jiifka ee adag oo cusub 0223
Raaxo Nordic light PU gorgortanka kursiga cuntada ...
Nordic kursi flannel kursi faneel ah qaabka ...
Amazon Bakayle New Taranka Taranka Kaydinta Butros Ca ...